सुशान्त प्रकरण: एनसीबीको सोधपुछमा नायिका दीपिका पादुकोणको बयान बारम्बार बदलिएपछि..
बालिका बलात्कार गरेको आरोपमा १९ वर्षीया युवक पक्राउ भक्तपुरमा स्कुटर दुर्घटना : एक जनाको मृत्यु धुम्बाराहीमा बस्ने भनिएको नेकपा सचिवालय बैठक बालुवाटार सारियो सभा,जुलुस र प्रदर्शन नगर्न काठमाडौं जिल्ला प्रशासनको आग्रह नेपालका ए डिभिजन फुटबल क्लब एएफसीका लागि अयोग्य पार्टीले कुनै पदबाट बिदा गर्न चाहे ओली बिदा हुनुपर्छ : नेतृ शाक्य भर्खरै प्रकाशित SHOW BREAKING NEWS
दीपिका बयानका क्रममा रोकिएकी समेत थिइन् ।
एजेन्सी – नायिका दीपिका पादुकोणले केही दिनयता कानुनी झमेला भोगिरहेकी छिन् । नायक सुशान्त सिंह राजपुतको निधनपछि उत्पन्न परिस्थितीले उनलाई कानुनी घेरामा ल्याएको हो । सुशान्तको निधनको मुद्दा ड्रग्ससँग जोडिएपछि दीपिका लगायत केही नायिकाको नाम यसमा मुछिएको छ ।
शनिबार बलिउडका केही नायिकासँग भारतको नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरोले बयान लियो । बयानका क्रममा नायिका साराअली खान, रकुल प्रित सिंह र श्रद्धा कपुरले आफ्नो अडान स्पष्ट रुपमा राखेको भारतीय मिडियाले उल्लेख गरेका छन् । उनीहरुले ड्रग्स सेवन नगरेको अडान राखेका थिए ।
तर, नायिका दीपिका पादुकोण पनि स्पष्ट अडानमा उभिन नसकेको भारतीय मिडियाले जनाएका छन् । मिडिया रिपोर्टका अनुसार, दीपिकाको बयान बारम्बार बदलिएको थियो । उनी, बयानका क्रममा रोकिएकी समेत थिइन् ।
दीपिकालाई यो घटनाले गहिरो असर पारेको भारतीय मिडियाले जनाएका छन् । शुक्रबार बेलुकी चार्टर प्लेनबाट मुम्बइ आएकी दीपिकाले आफ्ना वकिलहरुसँग छलफल समेत गरेकी थिइन् । तर, शनिबार बयानका क्रममा भने दीपिकामा आत्मविश्वास नदेखिएको बताइएको छ ।
एनसीबीले नायिकाहरुलाई अब कहिले बयानका लागि बोलाउँछ पक्का छैन । तर, कुनै पनि समयमा नायिकाहरुलाई बयानका लागि बोलाउन सक्ने दाबी भारतीय मिडियाको छ । शनिबार बलिउडका ४ नायिकाको मोबाइल समेत जफत गरिएको छ ।
बालिका बलात्कार गरेको आरोपमा १९ वर्षीया युवक पक्राउ...
भक्तपुरमा स्कुटर दुर्घटना : एक जनाको मृत्यु...
धुम्बाराहीमा बस्ने भनिएको नेकपा सचिवालय बैठक बालुवाटार सारियो...
सभा,जुलुस र प्रदर्शन नगर्न काठमाडौं जिल्ला प्रशासनको आग्रह...
नेपालका ए डिभिजन फुटबल क्लब एएफसीका लागि अयोग्य...
पार्टीले कुनै पदबाट बिदा गर्न चाहे ओली बिदा हुनुपर्छ :...
पशुपतिनाथ मन्दिर पुस १ गतेदेखि खुल्ने...
कस्की दुलही बनिन् नायिका केकी ?...
बालिका बलात्कार गरेको आरोपमा १९ वर्षीया युवक पक्राउ
भक्तपुरमा स्कुटर दुर्घटना : एक जनाको मृत्यु
धुम्बाराहीमा बस्ने भनिएको नेकपा सचिवालय बैठक बालुवाटार सारियो
सभा,जुलुस र प्रदर्शन नगर्न काठमाडौं जिल्ला प्रशासनको आग्रह
पार्टीले कुनै पदबाट बिदा गर्न चाहे ओली बिदा हुनुपर्छ : नेतृ शाक्य
पशुपतिनाथ मन्दिर पुस १ गतेदेखि खुल्ने
कस्की दुलही बनिन् नायिका केकी ?
बुटवलमा उपचाररत २ कोरोना संक्रमित मृत्यु
भारतसहित सबै मुलुकका लागी अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुला